The top toban shaqooyin loogu talogalay qaxootiga: adeegga cuntada | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Ogow sida shaqo ee adeegga cuntada si aad u hesho
adeegga cuntada waxaa lagu magacaabaa sida warshadaha cuntada ee, ganacsi makhaayad ama madadaalo. dheeraad ah 14 milyan oo qof ka shaqeeyaan warshadaha cuntada adeegga, iyo shaqooyinka ugu waa fudud si ay u helaan ka badan ganacsiyada kale. warshadaha adeegga cuntada waxaa sii kordhaya waayo maraykanku ku raaxaysan baxay in lagu cuno qoyska iyo saaxiibada.
Waa maxay shaqada?
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah shaqooyin iyo xirfado si ay u eegaan in warshadaha cuntada adeegga:
Adeegga Kaaliyaha Cuntada
The caawiyeyaasha adeeg cunto diyaarinta iyo cuntada iyo cabitaanka oo macaamiisha u adeegaan dhammaan noocyada kala duwan ee meelaha, dukaamada qaxwada in makhaayadaha qaali. Sidoo kale waxay leeyihiin si ay u caawiyaan biilasha iyo sii jikada nadiif ah oo hagaagsan.
cuntokariyihii makhaayad A waa qof diyaariyey iyo cuntada karsan ee makhaayadaha ama makhaayadaha yar. Waxay sameeyaan wax walba oo, ka iibsato waxyaabaha loo kariyo cuntada buuxa. In makhaayadaha waaweyn, Waxay kaa caawin ah maqaayad ugu khibrad diyaarinta miraha iyo khudaarta iyo hawlo kale oo badan oo.
Daawo video ah si aad u badan oo ku saabsan xirfad ku baran kartaa sida kuugga makhaayad
Oo adeegto ama kabalyeeri (sidoo kale loo yaqaan server)
Work loox sugaya waa in lagu qeexo menu, qaadashada amarada iyo adeega cuntada. Waa shaqo fiican oo qof shaqsiyad xilka jecel qabashada dadweynaha. In Maraykanka, server saadaaliyay in lagu daro in ay mushaharka.
hilibka lagu qalo
hilibka lagu qalo A dhimaysa hilib xirfad waayo, dukaamo iyo makhaayado. hiliblayaasha diyaariyey, qiimaha iyo soo bandhigid gelin hilib. Waa in ay awoodaan in ay xooga saarto iyo lacag bixisid si aad hawlaha ay la kulmaan dareenka dhow.
“kuugga” Waa magac kale oo kuugga xirfadle tababaran. dabaakhyo waa in uu leeyahay si faahfaahsan fiiro u fiican in la raaco cuntada iyo in ay la socdaan oo sahay cunto karinta. Qaar ka mid ah maqaayad ku takhasusaan suugada ama cuntada la dubay. dabaakhyo cajiin takhasusay keega iyo macmacaan. kuugga A sous waa qof ka yar jihada kuugga fulinta iyo caawinaad la shaqeeya hawlaha badan.
Martigeliyaha ama acomodador
ciidankii A ama acomodador qabtaa Boos iyo soo dhaweeyay guests in miisaskoodiina, Waxa uu iyaga ka siinayo menu ah iyo guud ahaan iyaga ka dhigaa inay dareemaan raaxo. shaqada martida loo yahay ama acomodador waa shaqo ah heerka bilowga ah, iyo shaqo doondoonaan qof saaxiibtinimo oo lagu kalsoonaan karo halkii qof leh waayo-aragnimo weyn.
Tababaraha makhaayad waa qof maamula restaurant oo dhan iyo inuu xaqiijiyo in wax walba si qumaati ah. Ilaali shaqaalaha, codsanaya sahay, mararka qaarkood waxay la macaamiisha iyo suuq xamili iyo maaliyadda ka qaban.
Faahfaahin intaas ka badan oo ku saabsan shaqada ee maamulaha guud ee maqaayad ku taala this video
Baro dheeraad ah oo ku saabsan shaqooyinka adeegga cuntada
Waa adeeg cunto shaqo sax ah ii?
Work in adeegga cuntada u ogolaan doonaa inaad la kulanto iyo la macaamilaan dadka ka soo jeeda kala duwan. shaqo waxay noqon kartaa mashquulsan, mararka qaarkood, iyo macaamiisha qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in ay la tacaalaan. Is deji cadaadis iyo aragti fiican yihiin tayada wanaagsan loogu talagalay dadka tartanka this. Shaqooyin badan ayaa waxay bixiyaan adeeg cunto jadwalka dabacsan si aad u sameysan kartaa shaqadaada iyo waxa lagu biiriyo dugsiga, qoyska iyo hawlaha kale ee.
Qabtaan Test Is-Qiimaynta ee careeronestop.org
BOX feature: Mustaqbalka adeegga cuntada: Noqo Tababaraha adiga kuu gaar ah!
Ma jeclaan lahayd in ay ka shaqeeyaan adeega cuntada iyo bilaabaan ganacsi kuu gaar ah? Ma leedahay cunto qaas ah – laga yaabaa in cunto dhaqameed ka soo dalkooda hooyo?
baabuur Cuntada waa jikooyinka mobile in laguu ogolaado in aad si loo kariyo iyo cuntada u adeegaan. baabuurta cuntada u adeegaan oo immika cuntada karsan, inta badan la theme ah qowmiyadaha- cuntada ka dalkooda hooyo laga yaabaa cusub oo xiiso Maraykanka. sannad kasta, Waxaa wadanka oo koraa tirada baabuurta cuntada. Waxay aad loo jecel yahay sida kale in maqaayado yihiin. Haddii aad cunto kariye wanaagsan ama garaneysaa qof soo karinayaan cuntada delicious, Wax weyn ayay ahaan lahayd inay iska kaashadaan on fikrad this. gaari xamuul ah cuntada A ayaa sidoo kale noqon kartaa ganacsi qoys wanaagsan.
akhri incubadora de Spice Jikada: awood qaxootiga in ay ganacsi gaari xamuul ah cuntada
Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida loo bilaabo ganacsi gaari xamuul ah oo cunto ah.https://www.moneycrashers.com/how-to-start-food-truck-business-plan/
(Waxa kale oo ku xidhan bogga RCO) Sidee si ay u bilaabaan ganacsi kuu gaar ah?
Dadka intooda badan helaan waayo-aragnimo in adeegga cuntada, gaar ahaan maqaayadaha, laga bilaabo hoose iyo si tartiib tartiib ah kor ugu. adeegga cuntada wanaagsan waa in aad ka heli kartaa shaqooyin badan oo aan tababar ama waayo-aragnimo. Sidaa darteed, Haddii aad shaqo u baahan tahay isla markiiba, Waa doorasho wanaagsan sababtoo ah sida caadiga ah waxaa jira dalabka ah dadka bilaa xirfadda in industry ee. Laakiin haddii aad jeceshahay in aad la kariyo, ama aad jeclaan lahayd in mashquulin meel hoggaanka a, marka hore u baahan tahay si aad u hesho qaar ka mid ah caddeyn ama waayo-aragnimo.
Waayo, shaqooyin heer-galo, adeegga cuntada ku xigeenka, Weelka iyo adeegga miisaska, tababarka loo baahnayn in si gaar ah, laakiin shahaadada dugsiga sare kaa caawin kara inaad shaqo ku hesho. loo shaqeeyaha intooda badan ku siin tababar shaqo shaqaalaha cusub.
Baro loo helo shahaadada dugsiga sare - fasalo online lacag la'aan ah oo ka tirsan xarunta Qaxootiga Online
Iyadoo qaar ka mid ah cuntada kariya, iyo maqaayad makhaayad heshay tababarka, Kuliyadda, kuwa kale laga faa'iiday ay waayo-aragnimo ka shaqeeya makhaayadaha. Dad badan oo lagu bilaabo jagooyinka heer-galo iyo shaqo adag ay u guuraan ilaa salaanka.
Haddii aad xiisaynayso in maamulka makhaayad, waxaad u baahan doontaa aqoonsiga qaar ka mid ah. Waxaa jira koorsooyin badan oo la heli karo ee maamulka iyo maareynta la muddo dhan laba sano.
badan oo ku saabsan shahaadooyinka Baro warshadaha cuntada adeegga
- dib u eegaan saddexda khayraadka waxtar leh ee ku qoran boggan
Waxaa jira fursado badan oo online si ay u bartaan oo ku saabsan xirfadaha makhaayadaha cuntada. dugsiyada Online kaa caawin doona inaad xirfad xiriir oo aad iyo u bartaan oo ku saabsan maaraynta makhaayad. tusaale ahaan, Coursera bixisaa koorsooyin badan oo online:
kulliyadaha bulshada badan ayaa bixiya barnaamijyo tababar loogu badali lahaa oo qaali ah oo lagu caawiyo qaxootiga iyo muhaajiriinta si loo hagaajiyo isgaarsiinta iyo Ingiriisi xirfadaha.
Raadi Kulliyadda bulshada, kuu dhow.
dugsiyada kariska bixiyaan tababar maqaayad iyo shaqooyinka kale ee adeegga cuntada. Halkan waxaa ah tusaha Online dugsiyada tababarka, Kuliyadda
Job CorpsWaxay bixisaa waxbarasho lacag la'aan ah iyo tababar gabdhaha iyo wiilasha dhallinyarada, da 16 a 24 sano jir ah. Hubi in aad barnaamijka Arts, Kuliyadda.
Maxaa dhacaya haddii aan hore u soo baxday ee dal kale?
Haddii aad leedahay shahaado ama adeeg cunto Aqoonsiga ee dal kale, Upwardly Global caawisaa waddanka u soo guurey, qaxootiga, wadanka iyo heystana Visa soo galootiga ah gaar ah awood u leeyihiin inay shaqeeyaan (SIVs) ku guuleysatey in mustaqbalkooda ciyaareed ee dalka Mareykanka.
Ma u baahan tahay bartaan Ingiriisi?
Ma u baahan tahaynoqoto muwaadin Mareykan ah?
Ku bilow shaqo raadintaada. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fursadaha:
Isticmaal xarunta shaqada: xarumaha shaqada ee dawladda magaalada walba waa lacag la'aan. Oo halkaasay ku bixin talo iyo hayaan liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Waxay kugu xidhi karaan tababarka iyo waxbarashada adeegga cuntada shaqada. heli aad shaqada kugu dhow.
Raadi internetka: com waa goobta shaqada in ka caawisaa dadka shaqo saacaddiiba ka heli a. Halkan aad liiska hadda shaqooyin cuntada iyo makhaayadaha.
La socodsii resume: Talooyin ay u horumariyaan resume aad u fiican
Practice wareysigaaga Sidee inay ku guuleystaan ​​waraysiga shaqo ee soo socota